ယိုးဒယားမှရွှေလူလည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ယိုးဒယားမှရွှေလူလည်
Posted by koko on Aug 9, 2011 in Copy/Paste | 23 comments
လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်လောက်ကပါ။ကျွန်တော်တို့ေ၇ွှမြန်မာ အဖွဲ့ ယိုဒယားရောက်တုန်းကပါ။ဘန်ကောက်က်ိုFOC နဲ့ သွားခဲ့တုန်းက။သိတယ်မှတ်လား ယိုဒယား လူကြီးပိုင်း (အသက် ၅၀ ကျော်လောက်တွေက) မြန်မာဆိုရင် ကြည့်တဲ့မျက်လုံး တစ်မျိုးဖြစ်သွားရော။
ဘယ်ရမလဲ ကျွန်တော်တို့လဲမြန်မာပေါ့ လူလည်ပေါ့။ ဘယ်ကလာလဲမေးရင် ပါစပ်ထဲကြုံတာလျောက်ပြောတာ။(အဲတုန်းကတော့ ကိုယ့်ဟာကို အားငယ်သလိုလို ရှက်သလိုလိုနဲ့ မြန်မာလို့ပြောရမှာ ခုနေဆိုရင်တော့အမှန်အတိုင်းပြောမှာပါ)။ကြုံရင်ကြုံသလိုပေါ့။တရုတ်ပြောလိုပြော။ဗီယက်နမ်ပြော
လိုက်။ကိုယ် ကတရုတ်လို့ပြောလိုက်လို့ ဟိုဘက်က တရုတ်လိုမှုတ်နေလို့ထွက်ပြေးရတာ ခနခနပဲ။အဲဒါနဲ့ နောက်ပိုင်းကျတော့ ဂျပန်ပေါ့။ ဒါကျတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်။ဂျပန်လိုသိပ်မတတ်ကြဘူး။အင်းအဲလိုလိမ်နေရင်းနဲ့ တစ်ည တော့ taxi ငှားပြီး ဟိုတယ်ပြန်တော့ ကားပေါ်မှာပေါ့။အောင်မာ ဒီတစ်ခါတော့ကိုယ်ကစပြောရဘူး။ driver ကဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ်မသိဘူး YOU ARE JAPAN တဲ့။ဘယ်ရမလဲကျွန်တော်လဲ yes တောင်မပြောပဲ yeah လိုက်တာပေါ့။from tokyo လားတဲ့။ yeah ပေါ့။အဲဒါနဲ့ ကိုရွှေ driver က သူ ဟင်းဖုန်းထုတ်ပြီးတော့ ဆက်ပါလေရော။ကျွန်တော်လဲ ဘာလဲမသိဘူးပေါ့။အသာလေး စောင့်ကြည့်နေတာပေါ့။သူဟာသူယိုးဒယားလိုပြောပြီး ကျွန်တော့်ဘက်လှည့်ပြီးတော့ this is japan တဲ့။ ဘယ်ရမလဲ မြန်မာပဲ။ဖုန်းကိုခပ်တည်တည်လှမ်းယူပြီးတော့ hello ပေါ့။ဟိုဘက်ကတော့ဂျပန်လိုမှုတ်ပါလေရော။ဂျပန်လိုဆိုလို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ပါဂျဲရိုး တစ်လုံးပဲကြားဖူးတာ။ဘယ်ရမလဲ i am not japan ပေါ့ but come from tokyo ပေါ့။ဟိုဘက်ကလဲ အောင်မယ် sorry ပါတဲ့။ဘာအကူအည်ီပေးရမလဲပေါ့ ခပ်တည်တည်ပဲ
။ ဒါနဲ့ ဟိုဘက်က ယိုးဒယားမ ဗျ။ tokyo မှာလူရှာမလို့ဆိုပြီးဘယ်မှာနေတာလဲ ဘယ်တော့ပြန်မှာလဲ
တော့ပဲ လမ်းမှာတင် taxi ပေါ်ကဆင်းပြေးခဲ့ရတယ်။ဟော်တယ်ရောက်တော့ပြန်ပြောပြီး ရီလိုက်ရတာ။ ရွှေမြန်မာ လူလည်ပေါ့။
ပြန်ခါနီးတော့ မြဘုရားတော့သွားမှဆိုပြီး တစ်ခေါက်သွားတာပေါ့။taxi နဲ့ပဲသွားတာ။ချောချောမောမောပဲ ဘုရားရောက်သွားရော။ မြဘုရားကျတော့ သူများတွေဝင်သလိုက်ဝင်သွားရော။အဖြူကောင်တွေနဲ့ရောဝင် သွားတာကိုး။ ယိုဒယား အသက်ကြီးကြီးတစ်ယောက်က ကျွန်တော်တုိ ၂ယောက် ယိုဒယားလိုပြောပြီး လူကြားထဲကဆွဲထုတ်သွားပြီ ဘယ်ဘက်ဘေးကအပေါက်ကိုပြပြီး
အဲဒီက၀င်သွားတဲ့။ကျွန်တော်တို့လဲခနတော့ကြောင်သွားတယ်။နောက်တော့ချက်ချင်းပဲ အော်ငါတုိ့ကို ယိုးဒယားမှတ်ပြီး ဒီဘက်က၀င်ခိုင်းတာက်ို ။ဟိုဘက်ကတော့ foreigner တွေ လက်မှတ်တွေထုတ်ပေးနေတာတွေ့တယ်။အပြန်မှမေးကြည့်တော ဘတ် ၂၀၀ တဲ့ ၀င်းကြေးက လက်မှတ်ကို အ၀င်ကတည်းက၀ယ်ရမှာတဲ့။ငါတို့ မြန်မာပေါ့ ။ ဘန်ကောက်မှာတောင်လူလည်ပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ ဘုရားဖူးပြီး ပြန်တော့ရောပေါ့။ဘုရားကပြန်ထွက်ပြီး ညောင်းတာနဲ့ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်ပြီး အဲဒီနားကသစ်ပင် အ၀ိုင်းမှာခန ထိုင်ပြီးအမောဖြေတာပေါ့။အဲလိုထိုင်နေတုန်း ခိုစာရောင်းတဲ့ယိုးဒယားအဘွားကြီးရောက်လားပြီး
ယိုးဒယားလိုခိုစာလာရောင်းပါရော။အသက်တော့တော်တော်ကြီးပြီ။ ၇၀ ၈၀ လောက်ရှိပြီ။ ဘယ်လောက်လဲပေါ့ မေးလိုက်တော့ ယိုဒယားမဟုတ်မှန်းသိပြီး ဘိုလိုေ၇ာင်းပါလေရော။ဈေးမေးတော့ ကျွေးသာကျွေးပါတဲ့။ဈေးက never mind ပါတဲ့။
ဒါနဲ့တစ်ပန်းကန် ယူကျွေးလိုက်ရော။သေးသေးလေးပါ။လက်ဖက်ပန်းကန်အသေးစားလောက်ပဲရှိတယ်။ ကျွေးပြီးတော့
ဘယ်လောက်လဲပေါ့။ အဘွားကြီးက ဘတ် ၂၀၀ တဲ့။မြန်မာကျပ်ငွေ ၆၀၀၀ကျော်ဖိုး။ ဆူးလေမှာ ၅၀ ၁၀၀ ပေါ့ ။ဒါနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာပေါ့ များတယ်ပေါ့။အဘွားကြီးက သူမသိဘူး သူဟာကျွေးပြီးသွားရင်
နောက်ဆုံးတော့ ၂၀၀ပေးပြီး လစ်လာရတော့တာပဲ။ဟိုတယ်ေ၇ာက်တော့ ပြန်ပြောတော့ သူများတွေရီလိုက်ကျတာ။ အခုထိကြုံလို့ပြောရင် ရီကြတုန်းပါ။ရွှေမြန်မာ လူလည်ပေါ့။
Myanmar people, who have been to over sea, have their own stories.
But, mainly are sad stories.
When I was young & my vessel visited to Bangkok,
Some officers & I went ashore to Thai bath & massage parlor.
First, we tookabath, leisure & gavealot of tip money to Thai girls who bathed us.
After that, we tookasession in massage parlor.
These Thai massage girl asked, “ What is my nationality ”.
I simply answered “ I am Myanmar ( Phar Mah ) ”.
She said “ No way, you are cheating me, you must be Japanese or Chinese ”
I said “ Really, I am Myanmar & why I have to lie you ”
Do you guess, what she said ?
She said “ No way, Myanmar are only maids & hard labors &
they are very poor & cannot afford to spend ”.
I had nothing left to say again.
( Normally, we go outside with our regular cycle man for our security,
They normally wait outside or sit & drink in living room )
After that, she even (even) went out after our session,
to ask our cycle man whether I am reallyaMyanmar.
She cannot believe !!!
Only maids & hard labors ???
Feel really sad for Myanmar.
အာ …ဒီမိန်းမ ပြောထားတာ စော်စော်ကားကား … တော်သေးတယ် … ကိုနိုင်ငံခြားသားကြီးနဲ့တွေ့ ပေလို့ … မြန်မာထဲ ဒီလိုလူတွေလည်း ရှိပါသေးလားဆိုတာ လက်ခံသွားတော့တယ် … ဟီးဟီး
ဟုတ်ပါ့ ကို Foreign Residentရေ အများစုက ဒါတွေပဲဆိုတော့ အဲ့လိုပဲ အထင်ခံရတာ။ တချို့ဆို မြန်မာလို့ ပြောတာတောင် မသိဘူး။ near တရုတ်၊ ထိုင်း ပြောရတယ်။ ဒါတောင် ၀ါးတားတားရယ်။
အော်၊ အခုနောက်ပိုင်းတော့ အဲလောက်ကြီးအထင်သေးမခံရတော့ဘူးမို့လား
Foreign Resident ရေ။
မြန်မာ လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ အထင်သေးတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ဘဲကြည့်တတ်တဲ့
ခုနောက်ပိုင်း ခင်မောင်တိုး သီချင်းထဲကလို မြန်မာပြည်က တိုးရစ်တွေအများကြီး အပြင်ထွက်လည်တာတွေ ရှိနေပါပြီ။ Thai လောက်ကတော့ မရောက်ဖူးတဲ့လူတောင် ရှားသွားပြီလို့ ပြောရမယ်။
ဒါပေမယ့် Europe သွားလည်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောတာ ကြားပြီး စိတ်တော်တော်ပျက်သွားတယ်။ မြန်မာပြည်က တော်ရုံလူက Europe ကို သွားမလည်နိုင်ပါဘူး။ သူတို့ကလည်း မြန်မာပြည်ကသူဌေးဆိုပြီးသွားလည်တာ။ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ပစ္စည်းလေးတွေ ၀ယ်မယ်ပေ့ါ။ အိတ်ဆိုင်တွေရောက်တော့ အိတ်တစ်လုံးကို မြန်မာငွေနဲ့ ၁၀ သိန်း ၊ သိန်း ၅၀ လောက်ကျတယ်။ သွားတဲ့သူအချင်းချင်းလည်း အပြိုင်အဆိုင်မို့ ဝယ်ဖို့ ကြည့်တာ သူတို့ကို ဝယ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ဆက်ဆံခံရတယ်တဲ့လေ။ အဲလို ဆက်ဆံခံရလို့ပဲ ဝယ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ပြတဲ့အနေနဲ့ ဝယ်လာကြသေးတယ်တဲ့လေ။ တစ်နိုင်ငံကနေ နောက်တစ်နိုင်ငံ ဝင်ဖို့ကို သံရုံးဝင်တာ ဘယ်လိုအခက်အခဲလဲတော့ သေသေချာချာ မသိဘူး ၆နိုင်ငံဆိုပြီးသွားတာ အချိန်မမီလို့ ၅ နိုင်ငံပဲ ရောက်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆို Europe ကို ဘယ်တော့မှ သွားမလည်တော့ဘူးတဲ့။ Foreign Resident
Within European Union,
you don’t need to do “တစ်နိုင်ငံကနေ နောက်တစ်နိုင်ငံ ဝင်ဖို့ကို သံရုံးဝင်တာ ”
They will check your visa at only one entry point ( first country )
This system is called ” unified visa system as part of the Schengen Area ”
Please see detail at ;
Schengen visa ရထားရင်တော့ Schengen Area မှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ၀င်ဘို့ သီးခြား ဗီဇာ မလိုပေမဲ့ Schengen Area ထဲ မပါတဲ့ ဥရောပနိုင်ငံမျိုးဆို ဗီဇာထပ်လိုမယ်ထင်တယ် ဥပမာ အင်္ဂလန်လို နိုင်ငံအတွက်ပေါ့
Yes, I think England only.
Dear Shwe Ei,
Some of my friends, who still sailing to Bangkok said,
Nowadays, I cannot be said like it by those Thai massage ladies,
Because, most of the prostitutes & massage ladies are Myanmar now. ;(
ိ်ိ်ိ်ဟာသတစ်ခုရှိတယ် ။ ရွှေမြန်မာပါ ပဲ။ ယိုးဒယားတွေက်ို မကျေနပ်လိုလက်စား
ချေမယ်ဆိုပြီး ပိုက်ဆံစု ပြီးတော့ ဇိမ်ခန်းသွားတယ်ပေါ့။ ဟိုရောက်တော့ အညိုးနဲ့ပေါ့။ ဒါနဲ့ပြန်ခါနီးကျတော့ ယိုဒယားမက သူဟာသူပြောတာပါ။ သေနာကြီး သောက်ရမ်း လုပ် တာပဲ တဲ့။မြန်မာသံထွက်လာရောတဲ့။
That’s why, one of Myanmar friend bought 75, 000 $ Rolex watch in Switzerland,
Only after that, they surprised & gave respect.
( but, he was wearing short pant & slipper, when he bought the watch )
သူတို့တွေရှိတာမို့ … ဂုဏ်ကတော့ မနည်းပါဘူး..။
Mandalay Entertainment Group ထိပ်ပိုင်းတယောက်ယောက်ဟာ.. မြန်မာသွေးပါတယ်ကြားဖူးပါတယ်..။
panda expressက ဖေါင်ဒါကလည်း..မြန်မာဇာတိနွယ်ပါပဲ..။
ခင်ဗျားတို့အားလုံးနဲ့ ကျုပ်နဲ့ ဘယ်တော့မှ
နောက်ဆို ခင်ဗျားတို့သဘောထားတွေကို စိတ်ရှည်ရှည်ဖတ်ဘို့
ကျုပ် စိတ်တွေကို လျှော်လိုက်ပြီ
ဒီပို့စ်ရဲ့ ရည်ညွှန်း ဦးတည်ချက်က
သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်က သူ မြန်မာပြည်သားပါဆိုတာကို ပြောဘို့ရှက်တာ အရိပ်မွက်
ဒါက ပို့စ်ရဲ့ အထူးရည်ညွှန်းမှာ 10% လောက်ဘဲပါတယ်
နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်ရဲ့ ဂွင်ထည်းကိုရောက်လာတဲ့အခါ
အစဉ်ခြင်မဲ့ လုပ်တဲ့သဘောကို တည်နေမတဲ့ဥစ္စာ
ဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက် မိမိနိုင်ငံ လူမျိုး ဂုဏ်သိက္ခာ ယဉ်ကျေးမှု့ကို
ဝိုင်းသမလိုက်တာတွေဟာ နမူနာယူ သင်္ခန်းစာယူရမဲ့အစား
ဗမာဖြစ်တာ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တာ်
ပေး ကျုပ်ရစရာရှိတဲ့ ပွိုင့် နှစ်သောင်းကျော်
အကိုကြီး မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ကတော့ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းတွေ ပြောနေပါလား
သတိလေးလည်းထားပါဦး ဒီတစ်ရွာလုံး ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း
ရောက်ရာဒေသမှာ မြန်မာပြည်သားမဟုတ်သလို ဟန်ဆောင်ရတာကို
ထိုင်း ဈေးအခေါ်နဲ့ ကလားဈေးစစ်
ဈေးနှုန်းတွေ အစမတန်ခေါ်ပြီး ကလားတွေကလည်း
အလကားနည်းပါး ဈေးနှုန်းအဆမတန်စစ် ကြတာကို ဆိုလိုသလားမသိပါဘူးနော
ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားသားမှန်း သိတဲ့အခါ
မိမိနိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးရဲ့ လူမျိုးဂုဏ် သိက္ခာကို ထိပါးစေတဲ့အကြောင်း
လူကမွေးတာဘဲ လူလိုပြောရင်လည်း နားလည်ကြမှာပါ
ကို မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ကြီးမူးနေပြီလား
ကားတွေဘာတွေမောင်းနေသလား သတိထားနော် ဆယ်ဘီးကားတွေကို
ကိုယ့်အနောက်ကနေ ကိုယ့်ကို ဝင်ကြုံးလည်း ကိုယ်သေ
ကိုယ်က သူ့ကို ဝင်ကြုံးလည်း ကိုယ်သေ
ဘီယာ အရက် တစ်ခါမူးတဲ့စရိတ်က
ရွာက ကိုယ့် အဖေနဲ့ အမေ ထမင်းဘယ်နှစ်ရက်လောက် စားလို့ရတယ်ဆိုတာ
ှုယိုဒယားကတော့ မကျေနပ်တာ သမိုင်းကြောင်းအရပါ။ကိုယ့်ဟာကိုဂုဏ်မငယ်တဲ့အလုပ်လုပ်ရင်ဂုဏ်မငယ်ပါဘူး။ဆ၇ာတော်တစ်ပါးပြောထားတာရှိတယ် ဂုဏ်နောက်က်ိုလူကမလိုက်ရဘူးတဲ့ ဂုဏ်ကသာလူနောက်လိုက်ရမှာ တဲ့။အထင်ကြီးစရာမရှိလို့ အထင်မကြီးတာပေါ့(အများစု)။ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ရင်တော့နာတာပေါ့နော်။geopolitic အရအရေးပါတဲ့နေရာမှာတည်ရှိပြီးတော့ ကျွန်တော်အပါအ၀င်စောက်သုံးမကျ လို့ပေါ့။
နိုင်ငံခြားကိုမြန်မာတွေေေ၇ာက်ရင်၊ မြန်မာတွေဟာကိုယ့်ကိုကိုယ် မြန်မာလို.မပြောချင်ကြဘူး။ ပြောရမှာရှက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာ များသောအားဖြင့်တိုင်းရင်းသားတွေပါ။ မြန်မာအစစ်တွေကတော့ကိုယ်ကိုကိုယ်မြန်မာလို.ပြောကြပါတယ်။ နောက်တခုက မြန်မာဆိုရင်နှိမ်တယ်ဆိုတာမျိုးက အဲဒီမြန်မာကသူ.လုပ်ငန်းခွင်မှာပြောတာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် ညံ့လို့နေမှာပေါ့။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ဝန်ထမ်းဆိုရင်၊ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တဲ့ဝန်ထမ်း၊ အလုပ်ကိုလေးစားတဲ့
အနည်းငယ်သောစုန်းပြူးတွေကြောင့်သာ မြန်မာတွေကိုနှိမ်ကြတာပါ။ အချို.မြန်မာတွေကလည်း သဘောတရားကိုနားမလည်ကြဘူး။ ဥပမာပေးရရင် လူ၃ ယောက်ရှိရင် နိုင်ငံခြားသားကတယောက်၊ မြန်မာက၂ယောက်ဆိုရင် အဲဒီမြန်မာ၂ယောက်က အဲဒီနိုင်ငံခြားသားရှေ့မှာမြန်မာလိုပြောကြတယ်။ အဲဒီလူအကြောင်းသော်၎င်း၊အခြားအကြောင်းသော်၎င်းပေါ့။ ဒါမျိုးမပြောသင့်ပါဘူး။ အင်မတန်ရိုင်းပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားကသူ.အကြောင်းပြောတယ်လို.ထင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့။ ပြီးတော့ ဟိုအနှိပ်ခန်းကအမျိုးသမီးပြောတာ၊ မြန်မာဆိုတာ maid and hard worker
ဘဲဆိုတဲ့အမျိုးသမီး၊ သူကလည်းပညာမတတ်လို့ ၊ ပိုက်ဆံမရှိလို့၊ ပြီးတော့အဆင့်အတန်းနိမ့်လို.အနှိပ်ခန်း
လိုနေရာမျိုးမှာအလုပ်လုပ်နေရတာဘဲဟာ။သူကလည်းသူ့အမြင်ကိုပြောတာဘဲလေ။ ဘာဝမ်းနည်းစရာလိုလဲ။ မြန်မာဖြစ်ရတာ စိတ်ညစ်စရာတခုတော့ရှိရဲ့။ဘာလဲဆိုတော့သံရုံးမှာစာအုပ်သက်တမ်းတိုးခါနီးအခွန်ဆောင်ချိန်မှာပေါ့။ ဘာလို.လဲဆိုတော့အလုပ်သမားချင်းတူတူ၊ ဘင်္ဂလားတို့ အင်ဒိုတို.နိပေါတို.ဖိလစ်ပိုင်တို့ဆိုရင်စာအုပ်သက်တမ်းတိုးရင်အခွန်ဆောင်စရာမလိုဘူး။ သက်တမ်းတိုးခဘဲပေးရတယ်။ အဲဒီသက်တမ်းတိုးခကလည်းရာဂဏန်းလောက်ဘဲပေးရတာ။ အဲဒ်ါတောင်သူတို.မပေးချင်လို့over stay လုပ်ကြတာ။ မြန်မာသာအဲလိုသက်သက်သာသာနဲ့ဆိုရင် ဒုက္ခသည်လုပ်မဲ့သူများနည်းသွားမလားမသိဘူး။ အခုကြတော့ယောင်တော်ပြန်နဲ့ရောလွှတ်နေကြတာဆိုတော့မြန်မာအထင်သေးခံရတာ ရှိရတာပေါ့။
အဲလိုအထင်မသေးအောင်we are myanmer လို့
mrty4 ကကော မြန်မာ့အသံကကော myd ကပါ
Whenever I stay in Foreign land,
Whoever asked me “What is your nationality”
I replied “I am Burmese/Myanmar”
I clearly say it, “I am Burmese”, because, it is true.
(It is my personal opinion)
I have never proud of beingaMyanmar.
Very Sorry, It seems threaten,
But, show me something (I have to proud of beingaMyanmar)
Dear Foreign Resident-
ဆိုတော့- FR ဟာ မြန်မာတယောက်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားမှာ ပညာရှင်ဘဝ၊ မြင့်မားတဲ့ ဘဝမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး သူတို့နိုင်ငံက လူတွေထက် မသာရင်တောင် တန်းတူ နေထိုင်နိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒါ မြန်မာတယောက်အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူစရာပေ့ါ။ ဂုဏ်ယူစရာကို ပြပါဆိုရင် FR ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ ညွှန်ပြလိုက်ပါလေ။
ဒါ့အပြင် သယံဇာတကစလို့ သီးနှံစိုက်ပျိုးနိုင်တယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာစားဖို့ ဆန်စပါး သီးနှံ သားငါး၊ သောက်ဖို့အတွက် ရေချို အဲဒါတွေကို ဘယ်နိုင်ငံကိုမှ မှီခိုစရာမလိုဘူး။ သစ်ပင်တောတောင် ရေမြေသဘာဝတွေ စုံလင်တာ၊ မျှတတာတွေကို (အသုံးမချနိုင်ပေမယ့်) ဂုဏ်ယူနိုင်ပါတယ်။